Football Khabar » नेसन्स लिगमा सेमिफाइनलबाट भिएआर प्रयोग हुने !
नेसन्स लिगमा सेमिफाइनलबाट भिएआर प्रयोग हुने !
युरोपियन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा पनि भिएआर (भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री) प्रयोग हुने भएको छ । आयोजकले प्रतियोगिताका सेमिफाइनलदेखि भिएआर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खेललाई अनुशासित र निष्पक्ष बनाउन भन्दै २ दिनअघि मात्रै प्रतियोगितामा भिएआर प्रयोग गने निर्णय गरिएको हो । यससँगै यसपटक सेमिफाइनलका दुई, तेस्रो स्थानका लागि हुने एक र फाइनल खेल गरी चार खेलमा भिएआर प्रयोग हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा आज राति पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पोर्चुगल र स्वीट्जरल्यान्ड खेल्दैछन् । अर्को दिन नेदरल्यान्ड्स र इंग्ल्यान्डबीच दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ ।
त्यसपछि दुवै सेमिफाइनलका विजेता टिम फाइनल पुग्नेछन् भने पराजित दुई टिमलाई तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
प्रकाशित मिति २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:५३